Dhito Patra :: पुँजी वृद्धि भएन भने सिभिल बैंकले २०/२५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ-इच्छाराज तामाङ
पुँजी वृद्धि भएन भने सिभिल बैंकले २०/२५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ-इच्छाराज तामाङ
Interviewee: Er. Ichchha Raj Tamang
सिभिल बैंक लिमिटिडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभा गरेको छैन । बैंकले अघिल्ला वर्षको नाफाबाट ११ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिव ४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । दुबै आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरिसकेको बताईएको छ । तर यस बैैंकले किन साधारणसभा गरिररहेको छैन ? लाभांशको हिसावले सिभिल बैंक किन सबैभन्दा कमजोर बनेको छ ? विकासन्यूजले सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तमाग्ङसँग सोधेका छौं ।
सिभिल बैंकको साधारण सभा किन भईरहेको छैन ?
अघिल्लो वर्ष साधारणसभा ८ अर्ब पुँजी नपुगेको कारण गर्न सकिएको थिएन । कर्मचारी संचय कोषले २७ करोड रुपैयाँ प्रमोटर सेयरमा राखिदिएपछि हाम्रो पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष पुँजी नपुगेकाले राष्ट्र बैंकबाट साधारणसभामा जान स्वीकृत लिन सकिएन । यसपाली राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत आईसकेको छ । अब चाँडै नै सातौ र आठौं साधारणसभा एकै पटक गर्छौ । यसपाली लगानीकर्तालाई पनि राम्रै लाभांश दिन्छौं ।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत लाभांश दिने भन्नुभएको छ । केही समय अघि सिभिल बैंकले मुद्दती खातामा १३ प्रतिशत व्याज दियो । बचतकर्ताले १३ प्रतिशत व्याज पाउँदा लगानीकर्ताले ४ प्रतिशत मात्र प्रतिफल भयो । यस्तो लाभांशलाई कसरी राम्रो भन्ने ? अब लाभांशमा कसरी सुधार हुन्छ ?
म आफै पनि बैंकको ठूलो लगानीकर्ता हुँ ।
142,650,626 507,067 1,828
2,986,079 21,407 66
1,471,683 3,860 27
17,710,605 26,385 128
4,727,394 12,785 80
23,023,421 99,048 614
6,600,900 11,726 129
16,288,913 78,429 308
1,980,372.56 187,714 36
27,008,016 92,211 61
NMBMF 1,080 6.931
SMB 414 5.612
PICL 560 3.704
NMFBS 1,475 3.581
NLBBL 520 2.97
AHPC 109 2.83
NIBPO 480 2.345
ALBSL 399 2.308
BFC 102 2
BNT 6,936 2
MSLB 971 -5.728
SMFDB 522 -5.091
GILB 700 -4.11
NHDL 123 -3.906
SDESI 569 -3.559
NMBHF1 9.71 -3.19
SINDU 136 -2.857
NIBSF1 9.23 -2.637
GMFIL 128 -2.29
NICGF 9.88 -1.984
NLIC 23,698,065 890
CBL 16,788,142 164
NABIL 15,859,921 805
SHIVM 14,859,603 625
NBL 11,063,592 343
LBBL 10,899,504 208
PRVU 10,731,878 276
NIB 9,011,625 515
BOKL 8,564,286 265
EBL 8,276,942 669